Fivarotam-boky momba ny boky - Mpanolotsaina indostria cannnabis - Tom Howard
✔ Ento amin'ny sehatry ny ambaratonga manaraka ny orinasan-tsena anao
✔ 60 - 75 minitra fandalinana miaraka amin'i Tom amin'ny orinasanao
✔ famakafakana ny vidin'ny fambolena
✔ Mampiasa ny famakafakana ny vidin'antoka amin'ny tsy fahampiana
✔ Paikady fampiharana sy famakafakana
✔ Fameren-keloka amin'ny fangatahana ara-tsosialy
✔ Fomba sy fitakiana fitadiavam-bola
✔ fironana mipoitra ho an'ny orinasanao
✔ Kopia nosoratan'i Tom's Book momba ny lalàn'ny rongony
✔ $ 500.00 fihenam-bidy amin'ny fampiasam-bola ho avy
Fenoy ny varavarankely fandoavam-bola ary apetraho ny fanadihadihananao ny dinika momba ny fomba tsara indrindra hidirana amin'ny sehatry ny cannabis any Illinois.
Hodinihinay amin'ny antsipiriany ny lalàna sy ny paikady mandritra ny fotoananareo 60-75 minitra. Manantena ny hiresaka aminao tsy ho ela,
[wpep-form id = ”224111 ″]
Tongasoa eto amin'ny tontolo mampientam-po sy haingana haingana.
Misaotra anao niaraka taminay tamin'ny dianao. Iray amin'ireo olona 10-15 eo ho eo mahavoa ity pejy ity ianao anio. Ary tianay fa vonona hiditra amin'ny zavamaniry rongony ianao ary miantso anay!
Ka ny dingana manaraka amin'ny fiarahantsika miasa dia ny mandany $ 500 ary mamaky fivoriana momba ny dinika izay ahitanao ny trondro izay aretina. Misy LOTA mandeha amin'ny tontolon'ny varotra ary ny foto-dresakao amin'ny fanapahana hevitra dia hanimba azy io ho anao ka ho hitanao raha mety aminao ny cannabis na tsia.
Ny fidiranao amin'ny rongony dia manomboka amin'ny fampiharana avo lenta izay avo lenta ka manome fahazoan-dàlana anao ny fanjakana - mifanakalo hevitra momba ireo lafiny rehetra amin'ny fomba fampifangaroana ny iray amin'ireto fotoam-pivorianao ireto sy ny antony mety handaniany $ 100,000 farafaharatsiny ao amin'ny fanjakana.
Firy aminareo no tena vonona hiditra amin'ny toerana mila 500k $ farafaharatsiny? Ary tsy maintsy atsangano izany - ary izany dia natao ho an'ny antsinjarany (dispensary) fotsiny.
Noho izany dia tokony hiaro tena ianao aloha amin'ny alàlan'ny fakana hevitra amin'ny mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony izay efa hitanao sy henonao talohan'ny nanehoany ny fahaiza-manaony teo amin'ny sehatry ny indostria. Hahafantatra zavatra betsaka momba ny orinasa ianao ary ho afaka hitsara tsara kokoa ny amin'ny fomba hanatonana ny indostrian'ny rongony.
Manaraka anao amin'ny dingana manaraka ny consultant ary manome fanantenana azo antoka amin'ny fiverenan'ny nofinofin'andininy amin'ny zava-misy.
Maharitra eo anelanelan'ny 60 sy 90 minitra izy ireo. Ny olon-drehetra koa dia mahazo kopian'ny boky rongony nataon'i Tom tamin'ny taona 2010 izay tonga teto amin'izay misy azy ankehitriny.
Ary afaka mahazo iray maimaimpoana koa ianao. Haverina ny saram-pifandraisana raha mihazona ny mpisolovava cannnabis ho an'ny orinasan'ny olon-dehibe am-bola ianao amin'ny finday mandritra ny adiny roa maimaim-poana, izay mihoatra ny sandan'ny $ 2 natokana ho an'ilay fivoriana.
Vidio izao ny consulat-nao alohan'ny hijanonantsika tsy handray mpanjifa vaovao. Averina indray - mbola mampiasa fomba fanao tsara indrindra SEO izahay hampitomboana izany, ary afaka miresaka momba ny drafitra tranokalanao sy rindrambaikoo amin'ny consult.
Hiresaka aminao tsy ho ela.
Fantaro bebe kokoa momba ny lozisialy lozika manitra avy amin'ny pejiny ho an'ny fampiharana ny lalàna nomeny eto ambany.
Nanomboka tamin'ny taona 2010, nanao fikarohana sy namoaka momba ny lalàna cannabis i Thomas Howard ary manome fanampiana amin'ireo orinasa miditra amin'ny indostrian'ny cannabis izy.
→ Ny fahazoan-dàlana cannabis
Tips torohevitra momba ny fanarahan-dalàna
→ Famoronana fifanarahana
→ Hevitra momba ny fifampiraharahana
→ Safidio amin'ny fividianana / fivarotana